Kuthetha ukuthini ukuphupha ulwandle? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ukuphupha ulwandle kunokuba notoliko oluninzi kuxhomekeka kwizinto ezininzi, nokuba kunxulumene nomntu ophuphayo.
Ukususela kumaxesha amandulo, ulwandle belunqulwa kwaye luhlonitshwa ngenxa yobutyebi balo namandla alo amakhulu, luyakwazi ukuvelisa izinto ezinobundlobongela kunye nokuntywila kweyona nqanawa inamandla.
Uninzi lwabantu bakudala babesenza uthotho lwezithethe elwandle ezazibandakanya ukunikela ngezilwanyana kuPoseidon (uThixo wolwandle). Nanamhlanje, ngakumbi eBrazil, kusekho inkolelo efanayo ehambelana neIemanjá.
1 Iphupha lolwandle
2 Iphupha lolwandle olungazolanga
3 Iphupha lolwandle oluzolileyo
4 Iphupha lolwandle olungcolileyo
5 Iphupha lolwandle olucocekileyo
6 Iphupha lokuntywila elwandle
7 Iphupha lokuhamba phantsi kolwandle
8 Iphupha lomhlobo elwandle
9 Iphupha lobunzulu bolwandle
10 Iphupha lamaza amakhulu
11 Ukuphupha udada elwandle
12 Iphupha lokuwela elwandle
Ukuphupha kuhambelana nezinto ozifumeneyo kunye notshintsho, njengoothixo bakudala, ezona zinto zithandwayo ngamadoda, zityhila iminqweno efihlakeleyo okanye efihliweyo kwaye ngaloo ndlela zivelisa ukufa okanye ukuzalwa ngokutsha, kuya kuxhomekeka ikakhulu kwimeko yephupha ngokwalo. Nangona kunjalo, ukuphupha ulwandle ngokubanzi kunxulunyaniswa neentsingiselo ezilungileyo.
Iphupha lolwandle olungazolanga
Ukuphupha iilwandle ezirhabaxa kunokuthetha iingxabano zosapho. Kuya kufuneka uzilungiselele kuba umlo awunakuba uxakeke kakhulu. Hlala uzolile kwaye ungaze uphulukane nolawulo ukuze ungathethi into onokuzisola ngayo kwaye uzenzele iingxaki ezinkulu.
Iphupha lolwandle oluzolileyo
Ukuba ungumbukeli kwaye ujonge ulwandle oluzolileyo, olunamanzi acocekileyo kunye neemvakalelo ezilungileyo, oku kuthetha ukuba ubomi bakho buza kuhamba ngexesha lokuziva okufanayo, oko kukuthi, ukuzola kunye nokuba sempilweni, nangona kunjalo, phantse yonke into ekulo Ubomi bunezinto ezintle nakwicala elingalunganga, le meko inokuba sisilumkiso sokuba uhoye ngakumbi iqabane lakho kunye nobomi bakho bothando ngokubanzi. Kuba njengoko sisazi, uthando alunakuba yinto eyodwa.
Iphupha lolwandle olungcolileyo
Kwanasemva kwengcaciso edlulileyo, ngokungakholelekiyo njengoko kunokubonakala ngathi ukuphupha ulwandle olungcolileyo akuthethi nto imbi, kodwa ngokuchaseneyo, ulwandle olungcolileyo lubuyela kwimbono yokuba kukho into ehlanjiweyo kwaye konke ukungcola kugcinwe kuloo nto. ulwandle., ngandlela ithile liphupha elinxulunyaniswe nendaleko yokomoya kwaye ezinye zeempazamo zethu zobuntu zishiywa ngasemva, kwaye lo ngumqondiso obalaseleyo!
Iphupha lolwandle olucocekileyo
Ngaba waphupha ukuba ulwandle lwalucacile? Luphawu oluhle lokonwaba kosapho, uhambo olunenzuzo lweqela, okanye nokuthatha inxaxheba kumatheko angalibalekiyo. Nangona kunjalo, nokuba kuyacaca, ukuba olu lwandle luyaphazamiseka, hlala ulumkile, kuba eminye imilo ngaphakathi kosapho inokwenzeka kwaye isuse ukuzola kunye nokuba sempilweni kwakho.
Iphupha lokuntywila elwandle
Ngaba uphuphe ukuba ukhona kurhaxwa? Ngokuchasene noko unokucinga, olo hlobo lwephupha luhle kakhulu, kuba lithetha ukuba liya kuphumelela kwimicimbi yezoburhulumente, ihlala inxulumene nemali okanye neenkqubo zomthetho.
Iphupha lokuhamba phantsi kolwandle
Ngaba uphuphe ukuba uhamba phantsi kolwandle? Olu hlobo lwamaphupha lunentsingiselo ephezulu ngokwasemoyeni, kuba njengoko sisazi, ibhayibhile ngokwayo inika ingxelo yokuhamba phantsi kwamanzi enziwe nguYesu, ngomxube wokholo, ukomelela kunye nobulumko.
Ke ngoko, ukuba uphuphe iphupha elinje, luphawu lokuba usendleleni elungileyo kwaye uya koyisa bonke ubunzima, okoko ugcina iingcinga ezintle kunye nethemba elihlaziyiweyo.
Iphupha lomhlobo elwandle
Uphuphe ukuba umhlobo wakho useselwandle? Ukuba ngumntu owaziwayo, luphawu lokuba kungekudala uza kucela uncedo, ngakumbi kwimicimbi enxulumene nemali. Ukuba umntu akaziwa, oko kuthetha ukuba kuya kufuneka ucinge kwaye ucinge ngendlela onokubanceda ngayo abantu ngakumbi kubomi bakho bemihla ngemihla, njengendlela yokupha.
Iphupha lobunzulu bolwandle
Ubunzulu bolwandle abuhlali kakuhle kwaye liphupha eliqhelekileyo. Isenokuthetha ukuba ubomi bakho bobungcali bumile kwaye buye bube yinto engathandekiyo. Sebenzisa eli phupha ukubona amathuba amatsha kwaye uphile iindawo ezintsha. Funda ukubona izinto ezintle ezibonakala zimbi.
Iphupha lamaza amakhulu
Njengoko sele ubonile, akukho mfuneko yokoyika xa uphupha ulwandle, ubona amaphupha akho njengezilumkiso ezincinci engqondweni yakho kwaye uqala ukuqonda iziganeko ezithile ebomini bakho.
Ukuphupha udada elwandle
Ukuba ephupheni lakho uzibona uqubha elwandle, kusenokwenzeka ukuba intsingiselo yalo ixhomekeke kakhulu kwimood yakho ephupheni. Umzekelo, ukuba ukwimo ezolileyo kwaye uyadada ngokuqinileyo, oko kuthetha ukuba ukwimeko entle yomntu kunye neyobungcali. Wasebenzise lo mzuzu ukuba uzinike okona kulungileyo kwaye uphuhlise iiprojekthi zakho kwindawo yokusebenza njengexesha elifanelekileyo lokuba uphumelele, kuba uya kuxhaswa ngokuqinileyo yindawo yakho esondeleyo kunye nesondeleyo. Ukuba, ngokuchaseneyo, ephupheni lakho, uyadada uyaphambuka kwaye ulwandle lurhabaxa okanye lumnyama kakhulu, lumele iingxaki zoqoqosho, ke kuya kufuneka uqinise ibhanti lakho kwaye ungasebenzisi mali, kodwa gcina kangangoko unako ngamaxesha anzima oko kuza kuza.
Iphupha lokuwela elwandle
Ukuba ephupheni lakho uwela ngqo elwandle, nokuba kukhubekile, ingozi okanye nasiphi na esinye isizathu, into eyadibanisayo zizinto ezingentle, ke kuya kufuneka ulungele ukujongana nazo emva kolu hlobo lwamaphupha. Inxulunyaniswa nokusilela okukufutshane, kunye namashwa.